सहकर्मी कलाकारहरुको सिर्जना कत्तिको हेर्नु–सुन्नुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः असार ३, २०७६ - साप्ताहिक
सहकर्मी कलाकारहरुको सिर्जना कत्तिको हेर्नु–सुन्नुहुन्छ ?
सबै हेर्छु, साथै सेयर गरेर सहयोग पनि गर्छु । हामी सबैले आ–आफ्नो तरिकाले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अनिता चलाउने, गायिका
प्रायः साथीहरूको सिर्जना हेर्ने–सुन्ने काम गर्दै आएको छु ।
प्रल्हाद सुवेदी, गीतकार
एकदमै सुन्छु–हेर्छु । किनभने म नेपाली कला–संगीतलाई प्रेम गर्छु । नेपाली चलचित्र धेरै हेर्छु । केही समय अघि मात्र ए मेरो हजुर–३ हेरें । जात्रै जात्रा हेर्न मन छ, समयका कारण भ्याएकी छैन, चाँडै हेर्नेछु । क्रिटिक पढ्छु त्यसबाट पनि धेरै कुरा थाहा पाउँछु । सिर्जना हेर्छु र तुलना गर्छु हिजोको तुलनामा धेरै विकास पनि भएको छ र खुशी लाग्छ ।
कोमल वली, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा गायिका
म प्रायः सबै सिर्जना हेर्ने–सुन्ने गर्छु । हरेक सिर्जनाबाट केही न केही ज्ञान पाइन्छ । यो हाम्रा लागि एकप्रकारको स्कुल नै हो ।
निर्मल शर्मा, हास्य अभिनेता
धेरै सुन्छु–हेर्छु । एउटा राम्रो कलाकार बन्न पहिले राम्रो श्रोता तथा दर्शक बन्नुपर्छ । आफ्नो कौशल बढाउन पनि अध्ययनका रूपमा राम्रो सिर्जना धेरैभन्दा धेरै हेर्ने–सुन्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
महेश काफ्ले, गायक
आफ्नो सर्कलका साथीहरूको सिर्जना हेर्न–सुन्न सकेसम्म छुटाउँदिन ।
जेविका कार्की, अभिनेत्री
आफ्नोभन्दा बढी सुन्छु । फरक–फरक सहकर्मीहरूसँग भएका फरक–फरक ज्ञान र अनुभवबाट केही न केही लिन्छु अनि आफ्ना सिर्जनाहरूमा निखार ल्याउँछु । साथै सकेसम्म उनीहरूको भन्दा फरक गर्ने कोसिस गर्छु ।
लक्ष्मण शेष, संगीतकार
एकदमै हेर्छु अनि सुन्छु । सकेसम्म रिलिज भएकै दिन हेर्छु जसले गर्दा कस्तो खालको गीत बजारमा आएको छ जानकारी लिन सहज हुन्छ ।
प्रशन्ना पान्डे, गायिका
अहिले हामी जता भए पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हरेक कुराबाट सहजै अपडेट भैरहेका हुन्छौं । त्यसकै माध्यमबाट मैले पनि आफ्ना सहकर्मी हुन् वा अन्य विधाका नयाँ–नयाँ सिर्जनाहरू हेर्न अनि सुन्न
पाएकी छु ।
रजनी केसी, अभिनेत्री
म सबैको सिर्जना हेर्छु अनि सुन्छु । यसले आफूलाई थप परिपक्क बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
मुस्कान ढकाल, निर्देशक
एकदमै हेर्छु अनि सुन्छु ।
सुचित्रा श्रेष्ठ, निर्देशक
म सहकर्मी साथीहरूको गीत धेरै नै हेर्छु–सुन्छु अनि फेसबुकमा सेयर पनि गर्छु ।
खुमन अधिकारी, गायक
म एकदमै अपडेट छु । सबै कलाकारको काम र सिर्जना हेरिरहेकी हुन्छु ।
ऋचा शर्मा, अभिनेत्री
सुन्छु, यदि नजिकको साथीको हो भने त कम्पोज कै क्रममा सुनिन्छ तर अरू नचिनेका गायकको चाहिँ बजारमा चलेको वा राम्रो प्रतिक्रिया आएको आधारमा सुनिन्छ । सबै नयाँ गीत चाहिँ सुन्दिनँ ।
सबै त हेर्न– सुन्न सकिँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन । किनभने हरेक दिन कैयौं गीत रिलिज भैरहेका हुन्छन्, तर चर्चा गरिएका साथै चर्चामा रहेका अलि धेरै प्रचारमा आएका पोष्टर अनि सुटिङका तस्बीर हेर्दै हेरौं–हेरौं लाग्ने सिर्जना भए हेर्छु र मलाई राम्रो लागे सामाजिक सञ्जालमा सेयरसमेत गर्छु ।
महेन्द्र गौतम, मोडल
म आफैंले पनि फरक खालको सिर्जना खोज्ने, सुन्ने र मन पराउने भएकाले होला सहकर्मी साथीहरूको सिर्जना चासो दिएर हेर्छु–सुन्छु ।
धेरै नै, किनभने सहकर्मीहरूको सिर्जनाबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर
प्राप्त हुन्छ ।
याम क्षेत्री, गायक
सुन्छु–हेर्छु, अनि राम्रो कामको प्रशंसा समेत गर्छु । उहाँहरूको सिर्जनाका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण पनि स्पष्ट रूपमा राख्छु ।
कृष्ण मल्ल, कलाकार
म साहित्य कला र संगीत तीनै कुराको पारखी हुँ । विशेष गरी अहिले कलाकारितामा सक्रिय भए पनि सुरुवातका दिनहरूमा म कविता–कथा आदि लेख्थे । अहिले समकालीन साथीहरू व्यवसायिक गीतकार–लेखकका रूपमा स्थापित भैसकेका छन् र म साथीभाइ तथा सहकर्मीहरूको सिर्जना एकदमै नियालेर हेर्छु साथै तुरुन्त प्रतिक्रिया पनि दिन्छु ।
घनश्याम गौतम, हास्यकलाकार
समय मिल्दा हेर्ने–सुन्ने काम गर्छु ।
साम्तेन भुटिया, निर्देशक
धेरै कम तर यसको कारण पनि छ ।
राज सिग्देल, गायक
अग्रज–अनुज सबैको सिर्जना हेर्छु अनि त्यो भन्दा फरक गर्ने प्रयास गर्छु ।
टंक तिमल्सिना, गायक
आफूलाई मनपर्ने राम्रो गीत छ भने हेर्ने–सुन्ने मात्र होइन सेयर पनि गर्छु ।
देवी घर्ती, गायिका
प्रकाशित :असार ३, २०७६
नेताहरु किन गतिछाडा हुँदै गएका हुन् ?
गर्भावस्थामै सिर्जना सुब्बाको फोटोसुट